ओली चीनबाट फर्केलगत्तै राजपा सरकारमा सहभागी हुने ! || सुनौलो नेपाल
ओली चीनबाट फर्केलगत्तै राजपा सरकारमा सहभागी हुने !
काठमाडौं, ५ असार । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल तत्काल सरकारमा जाने कि नजाने भन्नेबारे अन्यौलमा छ । तर, पार्टीका केही प्रभावशाली नेताहरुले सरकारमा सहभागी हुन अब ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर र अध्यक्ष मण्डलकै सदस्य राजेन्द्र महतो सरकारमा जानुपर्नेमा उभिएका छन् । तर, अध्यक्ष मण्डलका अन्य सदस्यहरु राजकिशोर यादव, अनिल झा र महेन्द्र राय यादव लगायतका नेताहरु भने सरकारमा यथास्थितिमा जान नहुने पक्षमा देखिएका छन् ।
अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्य शरदसिंह भण्डारी भने अहिले सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेबारे प्रष्टसँग खुलेका छैनन् । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार भण्डारी पनि भित्री रुपमा सरकारमा जानुपर्ने र आफू नै मन्त्री बनाउनुपर्ने लविङमा छन् ।
स्रोतका अनुसार संयोजक ठाकुर भने यतिवेला अर्का प्रभावशाली नेता महतोलाई मन्त्री बनाएर सरकारमा पठाउन चाहेका छन् । त्यसो गर्न सके ठाकुर पार्टीको संसदीय दलको नेता र अध्यक्ष आँफै बन्न सक्ने निश्कर्षसहित आफू निकटका नेताहरुसँग अहिले आन्तरिक परामर्शमा छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि राजपालाई सरकारमा ल्याउनको लागि नियमति रुपमा राजपाका नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएलगत्तै राजपा पनि सरकारमा जान सक्ने अनुमानहरु गरिएको थियो ।
२ नम्बर प्रदेशमा रहेको राजपा र फोरम नेतृत्वको सरकार जोगाउनको लागि राजपाभित्र केन्द्रिय सरकारमा सहभागी हुनुपर्नेबारे चर्को आवाज उठिरहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली ६ दिने राजकीय भ्रमणको लागि आज चीन प्रस्थान् गरेका छन् । ओली चीनबाट फर्के लगत्तै राजपा सरकारमा जान सक्ने आँकलन गरिएको छ । राजपाका शीर्ष नेताहरु सत्तारुढ दलका नेकपाका नेताहरुसँग आन्तरिक छलपलमा छन् ।